China Nwee ọkụ ọkụ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Nwee ọkụ ọkụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Nwee ọkụ ọkụ)
100W niile Na-ejikọta ìhè anyanwụ
Bbier 100w Anyanwụ Street Ìhè bụ 100-110lm / w na 10000-11000 lumens. Nke a niile na otu uhie anyanwụ Street ìhè nwere nnukwu-ike lithium batrị 12.6V, 60AH. Ogige ndị dị na mbara igwe a na- enwu enwu bụ n'elu, ike ịgbanwe akụrụngwa dị ike. 100 Watts anyanwụ ogige ọkụ nwere Mmetụta / Motion Motion. Nkwụsị...
Nwee ọkụ ọkụ Nwepu ọkụ ọkụ Igwe ọkụ ọkụ Nnukwu ọkụ ọkụ Ufo weere ọkụ ọkụ 25Wenwe ọkụ ọkụ Enwetara ọkụ ọkụ Egwuregwu ọkụ ọkụ